भालुको डरले रुसमा संकटकाल !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भालुको डरले रुसमा संकटकाल !
बीबीसी। रुसले एक इलाकामा भालुका कारण संकटकालको घोषणा गरेको छ। स्थानीय अधिकारीका अनुसार रुसले रिहायशी क्षेत्रका करिव एक दर्जन ध्रुवीय भालु देखा परेका छन्। जसका कारण स्थानीयमा त्रासका वातावरण उत्पन्न भएको छ।
नेवाया जेम्लया नामक द्वीपमा प्रशासनले यहाँका भालुले सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्ने गरेको जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण ध्रुवीय भालु धेरै प्रभावित भइरहेका छन्। उनीहरु आफ्नो आहारको खोजीमा मानिसको सिकार गर्न बाध्य भएका छन्। रुसमा यी भालुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यी भालुको शिकार गर्न प्रतिवबन्ध लगाइएको छ।
योसँगै संघीय पर्यावरण एजेन्सीले यी भालुलाई मात्रकालागि कुनै पनि प्रकारको लाइसेन्स जारी गर्दैन। स्थानीय अधिकारीका अनुसार यी भालु प्रहरीकातर्फ बाट जारीगरिने चेतावनी संकेतबाट पनि डराउँदैनन्। जसका कारण अवस्था झन भयावह हुँदै गएको छ।
यो द्वीपको एक प्रमुख इलाका बेलुश्या गुबामा ५२ भालु देखिएको थियो। यी मध्ये ६ देखि १० वटासम्म भालु सधैं यही इलाकामा बस्छन्।
स्थानीय प्रशासनका प्रमुख विंगशा म्युसिनले भने, ‘स्थानीय सैन्य चौकी नजिक पाँचभन्दा धेरै भालु बस्छन्। यो चौकीमा वायु सेनाको बेस पनि छ।’
एक अधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘ म १९८३ देखि नेवाया जेम्लामा छु। तर यहाँ यति ठूलो संख्यामा भालु मैले कहिल्यै देखेको थिइन्।’ अधिकारीका अनुसार भालुका कारण स्थानीय मानिस निकै डराएका छन् र जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ।
स्थानीय प्रशासनका उपप्रमुख एलेक्जेण्डर मिनायेवतले भने, ‘मानिसहरु निकै डराएका छन्। उनीहरु आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। उनीहरुाके दैनिक काम प्रभावित भएको छ। अभिभावले आफ्नो नानीलाई स्कुल पठाउन सकेका छैनन्।’
जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिक समुन्द्रको वरक कम हुँदै गएको छ। जसका कारण ध्रुबीय भालुले आफ्नो सिकार गर्ने बानीमा परिर्वन ल्याउँदैछन्। उनीहरु धेरै जसो समय नयाँ ठाउँको खोजीमा हुन्छन्। जसका कारण रिहायशी इलामा पुगेका छन् र मानिसहरुसँग उनीहरुको संघर्ष सुरु हुन्छ।